Arovy ny Ankizy - Dallin H. Oaks
Arovy ny Ankizy
Tsy tokony hisy hahavita hanohitra ny fiangaviana mba hiraisantsika hina hampitombo ny firaharahiantsika izay mahasoa ny zanatsika sy ny hoavin’ireo zanatsika—dia ny taranaka vao misondrotra.
Afaka mahatadidy ny fahatsapana nananantsika avokoa isika rehetra rehefa misy zaza mikiakiaka sy manainga tanana manakatra antsika satria mila fanampiana. Omen’ny Ray any an-danitra be fitiavana antsika ireo fahatsapana ireo mba hitaomana antsika hanampy ireo zanany. Aoka ianareo mba hahatsiaro indray ireo fahatsapana ireo eto am-piresahako mikasika ny andraikitsika hiaro sy hanao asa soa ho an’ireo zanaka.
Miteny avy amin’ny fomba fijery araka ny filazantsaran’i Jesoa Kristy aho, ka tafiditra ao anatin’izany ny drafitry ny famonjeny. Izany no antsoko. Ireo mpitondra eo an-toerana ao amin’ny Fiangonana dia manana andraikitra hisahana faritra iray, toy ny paroasy na tsatòka, fa ny Apôstôly kosa dia tompon’andraikitra hijoro ho vavolombelona amin’izao tontolo izao. Zanak’Andriamanitra avokoa ny ankizy rehetra any amin’ny firenena tsirairay, sy ny volon-koditra tsirairay ary ny finoana tsirairay.
Na dia tsy miresaka pôlitika na pôlitikam-panjakana aza aho, toy ireo mpitondra fiangonana hafa dia tsy afaka miresaka mikasika izay mahasoa ny ankizy aho raha tsy miresaka ihany koa mikasika ireo safidy ataon’ny olom-pirenena, sy ireo tompon’andraiki-panjakana, ary ireo mpiasa ao amin’ireo fikambanana tsy miankina. Eo ambanin’ny fitarihan’ny Mpamonjy avokoa isika rehetra mba hifankatia sy hifampikarakara, ary indrindra hanao izany ho an’ireo malemy sy tsy misy mpiaro.
Tena malemy tokoa ny ankizy. Kely hery na tsy manana mihitsy izy ireo mba hiarovany ny tenany na ho angoniny ho azy ary kely ny hery fandresen-dahatra ananany eo amin’ny zavatra maro izay tena ilain’izy ireo amin’izay mahasoa azy. Mila ny hafa hiteny ho azy ireo ny ankizy, ary mila olona mandray fanapahan-kevitra izay mametraka ny mahasoa azy ireo ho any alohan’ireo zavatra mahaliana ireo olon-dehibe izay feno fitiavan-tena.
Isika rehetra manerana izao tontolo izao dia tohina noho ny amin’ireo ankizy an-tapitrisany izay iharan’ireo heloka bevava sy fitiavan-tena mamohehatra ataon’ireo olon-dehibe.
Any amin’ny firenena miady sasany, dia angalarina mba ho lasa miaramila ao amin’ny andian-tafika mpikomy ireo ankizy.
Voatombantomban’ny tatitra iray avy amin’ny Firenena Mikambana fa ankizy manakaiky ny roa tapitrisa no simban’ny fivarotan-tena sy ny pôrnôgrafia isan-taona.1
Raha jerena amin’ny fomba fijery araka ny drafitry ny famonjena, dia iray amin’ireo fanararaotana loza be indrindra atao amin’ny ankizy ny fanakanana azy tsy ho teraka. Hironan’ny olona maneran-tany izany. Tao anatin’ny 25 taona dia ny tahan’ny fahaterahana teo amin’ny firenena teto Etazonia no ambany indrindra,2 ary ny tahan’ny fahaterahana any amin’ny ankamaroan’ny firenena Eorôpeana sy Aziana dia nijanona ho ambanin’ny fetran’ny fanoloana fotsiny ny isan’izay maty nandritra ny taona maro. Tsy olana ara-pivavahana fotsiny ihany izany. Koa satria mihena ny isan’ireo taranaka vao misondrotra, dia mihalefy ary farany dia hanjavona tanteraka ireo kolontsaina eny fa na dia ireo firenena aza.
Antony iray mahatonga ny tahan’ny fahaterahana hihena ny fanalan-jaza. Voatombantombana fa mihoatra ny 40 tapitrisa isan-taona ny fanalan-jaza manerana izao tontolo izao.3 Maro ireo lalàna izay manome alalana na mampandroso ny fanalan-jaza, saingy faharatsiana lehibe izany ho antsika. Fanararaotana hafa atao amin’ny ankizy izay mitranga mandritra ny fitondrana vohoka ny fahasimban’ny zaza ao an-kibo izay ateraky ny tsy fahampian’ny sakafo mahavelona hanin’ny reniny sy ny fihinanana fanafody.
Toy ny fanesoana mampalahelo ihany ny hoe maro be ireo zaza vonoina na simbaina alohan’ny hahaterahany nefa maro be ireo mpivady tsy mety mahazo zaza no mitady zanaka hatsangana.
Ny fanararaotana ny zaza na ny tsy firaharahiana ny ankizy izay mitranga aorian’ny fahaterahana dia hita miharihary kokoa. Zaza efa ho valo tapitrisa no maty alohan’ny faha-dimy taonany manerana izao tontolo izao, ary ny ankabeazany dia avy amin’ny aretina izay sady azo sitranina no azo sorohina.4 Ary ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny Fahasalamana dia nitatitra fa iray amin’ny ankizy efatra no tsy mitombo ara-tsaina sy ara-batana araka ny tokony ho izy, noho ny tsy fahampian-tsakafo.5 Noho ny fipetrahanay sy fandehananay any amin’ny toerana maro samihafa manerana izao tontolo izao, dia mahita betsaka amin’izany izahay mpitondra ato amin’ny Fiangonana. Nanao tatitra mikasika ireo zaza miaina ao anatin’ny toe-javatra “mihoatra noho izay azontsika eritreretina” ny fiadidian’ny Kilonga maneran-tany. Hoy ny reny iray tany Philippines hoe: “Indraindray izahay dia tsy manana vola ampy hividianana sakafo, saingy tsy maninona izany satria manome ahy fahafahana hampianatra ireo zanako momba ny finoana. Mifamory izahay ary mivavaka mba hahazo fampiononana, ary mahita ny Tompo mitahy anay ireo ankizy.”6 Tao Afrika Atsimo, dia nifanena tamin’ny zazavavy kely iray izay nanirery sy nalahelo ny mpiasa ao amin’ny sekoly ambaratonga voalohany iray. Rehefa namaly tamin’ny feo malefaka ireo fanontaniana feno fitiavana ilay zazavavy, d